March 2022 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uMpendulo Zulu, umfundi owenza ama-ironing board waseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali
NGOKUJWAYELEKILE ungalindela ukuthi umfana waselokishini njengontanga bakhe ukhule edlala ibhola neminye imidlalo ethandwa ngabafana baselokishini. Kepha uphume eceleni, wazihlupha ngokufunda ukwenza imisebenzi yezandla.
NGIFUNA ukuhalalisela umengameli, i-Infrastructure South Africa nebambisene nabo ngengqungquthela yokuheha abatshalimali ebingesonto elidlule. Bekungeyesine futhi iyona esahambe kahle kakhulu kunezinye.
UNkk uPearl Bhengu, isikhulu esiphezulu seThala
Isithombe: wuSlindile Khanyile
EQALA ukusebenza wathola ukuthi uhola imali ephindaphindiwe kunekayise owayesebenza efemini. Uthi loku kwamphatha kabi kodwa futhi kwamvula amehlo ngoba kunezinto ayengaziqondi ukuthi zenzeka kanjani.
UNkk uKhumalo weBPSC Carpenters noNksz uLiat Madinane weSika Creative Agency
UKUZAMA Ukuxhasa nokufukula osomabhizinisi abasafufusa, umasipala waseThekwini wenze umncintiswano i-eThekwini Municipality’s Lions’s Den Awards, lapho uklomelise khona osomabhizinsii abayisithupha ngoR120 000.
UNksz uNandisa Mpanza, oNksz uSiphindile noSimamele bakwaSibiya, abasunguli beMaliyeza ekhiqiza amaveji yaseVryheid, KwaZulu-Natali
BESE kuyisikhathi eside izelamani zifuna umsebenzi kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Bekuthi noma zizama ukuqala amabhizinisi ehlukene kungalungi. Kuze kwasiza ukuhlangana kwazo nomngani wazo wakudala eziqale ibhizinisi lezolimo naye.
UMnu uKutlwano Mbele, omunye wabasunguli beSaucy Boys, yaseGa-Rankuwa, ePitoli, eGauteng
INKINGA yokuswela imali yenza washiya phakathi izifundo zobuntatheli, umkhakha ayewuzwa ngaphakathi. Esehleli ekhaya wazihlupha ngokuthi yini angayenza ukuziphilisa.
IPhini likaNgqongqoshe wezeziMali uDkt uDavid Masondo
IMPI ephakathi kweRussia ne-Ukraine izowuthikameza umnotho weNingizimu Afrika kodwa akhona namathuba angase aqhamuka angenza uhlomule.
NAMHLANJE ngifisa sibheke ukuthi imiphumela empi ephakathi kweRussia ne-Ukraine yenzani emnothweni, ikakhulukazi waseNingizimu Afrika.
UMnu uMaele Mothiba, umsunguli weMitaa Africa, esiza amakhasimende akwazi ukudonsa i-internet yaseTshwane, eGauteng
UKUSEBENZA nokusekwa wumndeni ebhizinisini ukuthatha njengesibusiso futhi ukholwa wukuthi yiko okwenza adlondlobale ebhizinisini asanda kuliqala, nakholelwa ekutheni ukuzimela kulona kuzokwenza achume kwezamabhizinisi.
UMNOTHO ukhule ngo-1.2% ngekota yesine yango-2021, wafinyelela ku-4.9%. Lezi zibalo zikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto. Nokho igcizelele ukuthi umnotho ungaphansi ngo-1.8% kunangekota yokuqala yango-2020.
UBENGUMABIZWASABELE, enikela, enentshisekelo yokweseka osomabhizinisi, ikakhulukazi abantu besifazane futhi elazi ibhizinisi.
UNkk uNomusa Dube-Ncube ethula iSabelomali sango-2022/23 eMgungundlovu, KwaZulu-Natali, izolo
YIZE umnotho waKwaZulu-Natali ukhombisa izimpawu zokusimama ngokuphelele kodwa amathuba emisebenzi esifundazweni aphansi kakhulu. Isibalo sabantu abaqashiwe sehle ngo-5.1% ngekota yesithathu yango-2021. Intsha yiyona eshayeke kakhulu, njengoba isibalo sentsha engasebenzi siku-59.3%.
NGIKHOLWA wukuthi kunendlela elula uhulumeni waseNingizimu Afrika ongasiza ngayo izinkampani zabamnyama abasafufusa. Ziningi izindlela uhulumeni asezizamile kodwa kuyacaca ukuthi azitheli izithelo uhulumeni asuke efuna ukuzibona kanti nabo osomabhizinisi abaningi bazithola bengasizakali ngendlela ebebecabanga ukuthi bazosizakala ngayo.
Umcwaningimabhuku-jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthakasela ukuthi umsebenzi wehhovisi lakhe uthinta impilo yabantu
ENEMINYAKA ewu-11 walulazwa wuthishomkhulu wesikole esixube izinhlanga ayesanda kufika kusona ngoba ephase ngamalengiso umsebenzi wesiNgisi. Uthishanhloko wacikwa wukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ephuma esikoleni esiselokishini kodwa afike aqwaqwade izingane zabelungu emakhanda.
UMnu uSabelo Nyaba, imenenja yaKwaCele Farming yaKwaMaphumulo, KwaZulu-Natali
UKUBAMBA ngezandla zombili wonke amathuba awanikwayo kuletha imiphumela emihle kumlimi osemncane. Ayiminingi iminyaka aseyisebenze embonini yezolimo kodwa ukuzikhandla nokuzimisela kwakhe emsebenzini awenzayo kwenze wanikwa isikhundla sokuba yimenenja jikelele yepulazi elikhulu nelinezisebenzi ezingaphezu kuka-500.